Ciidamada Jubaland iyo AMISOM oo la wareegey Buulo Guduud
October 6, 2014 (GO)- Ciidamada Maamulka Jubaland iyo kuwa AMISOM ayaa la wareegey deegaanka Buulo Guduud ee gobolka Jubbada Hoose oo magaalada Kismaayo 30-km dhanka waqooyiga ka xigta.
Ciidamadan oo watey dabaabado iyo gaadiidka kale ee dagaalku goor hore oo maanta ah ayey ka ruuqaansadeen dhanka magaalada Kismaayo ee xarunta Maamulka Jubaland.
Sida wararka lagu helayo ma jirto wax iska caabin ah oo ciidamadaasi la kulmeen maadaama Al-shabab markii ay ka warheleen in duulaan lagu soo yahay halkaas isaga baxeen una jiheysteen dhanka degmada Jamaame.
Af-hayeenka Jubaland Cabdinaasir Seeraar oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in Al-shabab lagala wareegey Buulo Guduud, wuxuuna intaas ku daray in hawlgalku sii socon doono ilaa inta si buuxda dhulka Jubalanad looga sifeynayo Al-shabab.
Shalay ayey ahayd markii Madaxweynaha Maamulka Jubaland Amxmed Maxamed Islaan sheegay inay bilaabayaan hawlgallo baahsan oo guud ahaan deegaanada uu maamulkaasi ka kooban yahay looga sifeynayo Al-shabab.